रोचक Archives - NepalTrending
ढुंगाको आँशु झार्छिन् यी १५ वर्षीया बालिका, यसको कारण के होला ?
NepalTrending — October 3, 2021 add comment
काठमाण्डु: भारतको एक दुर्गम क्षेत्रकी १५ वर्षीया एक बालिकाको आँखाबाट दैनिक रुपमा ढुंगा निस्कने गरेको छ। पछिल्लो दुई महिनादेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ, तर डाक्टरलाई नै यसको चिकित्सकीय कारण थाहा छैन ।...	Read more »
चीनमा धेरै पुरुषले पाएनन् बिहे गर्ने केटी, बहुपति प्रथामा जान सुझाव !
NepalTrending — September 16, 2021 add comment
काठमान्डौं । हिन्दु धर्मशास्त्रका अनुसार द्रौपदीको विवाह पाँच पाण्डवसँग भएको थियो । नेपालको उत्तरी जिल्ला हुम्लामा बस्ने केही जातिहरुमा अहिले पनि यस्तो बहुपति प्रथा कायमै छ । एकजना महिलाले एकसाथ धेरै जना...	Read more »
यो भैंसी जसले बियर पिएपछि दिन्छ दोब्बर दूध !
NepalTrending — September 3, 2021 add comment
काठमान्डौं । भारतको लखनउमा एक किसानले भैंसीमाथि अनौठो प्रयोग गरेका छन् । उनले आफ्नो भैंसीले बीयर पिएपछि धेरै दूध दिएको दाबी गरे । अहिलेसम्म भैंसीलाई पौष्टिक आहार खुवाएर बढी दूध दिएको खबर...	Read more »
एजेन्सी । चोरी, डकैती जस्ता अपराधिक मुद्दामा प्रहरीले मानिसहरुलाई जेलमा थुनेको त सुनैकै कुरा हो तर, आज हामीले प्रहरीको हिरासतमा रहेको कुखुराको भालेको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौ । प्रहरीले दुईटा भालेलाई...	Read more »
२२ रुपैयाँमा नै छानी-छानी गर्लफ्रेण्ड ! हेर्नुहोस
NepalTrending — August 31, 2021 add comment
एजेन्सी । मानिसहरुले व्यापारको लागि जस्तो पनि उपाय अपनाउन सक्छन् । हरेक मानिसले आफ्नो व्यापार राम्रो होस् भन्ने चाहान्छन् र त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि तौरतरिका अपनाउने गर्छन् ।आज हामी तपाइलाई चीनको एक...	Read more »
दुरूस्तै मेस्सीजस्तै देखिने व्यक्तिः मेस्सी हुँ भन्दै ढाँटेर २३ महिलासँग सम्बन्ध राखेको आरोप !
NepalTrending — August 30, 2021 add comment
एजेन्सी । इरानका २८ वर्षका यी युवा दुरुस्ती फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी जस्तै देखिन्छन्। उनको सामाजिक सञ्जालमा लाखौांके फलोअर्स छन् । उनी इरानका रेजा पारास्तेस हुन्, उनलाई देखेर मेस्सीका प्रशंसक झु’क्किन्छन् ।...	Read more »
कस्तो अचम्म: यी तीनैजना दिदीबहिनी जन्म पनि एकसाथ, गर्भवती पनि एकसाथ !
NepalTrending — August 29, 2021 add comment
काठमाडौं । तपाई हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ एकै पटक जन्मेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी गर्भवती पनि एकैपटक भएका छन् । यो कुरा असम्भव जस्तै भए पनि क्यालिफोर्नियामा भने सम्भव भएको छ । एकैपटक...	Read more »
लाउरेकी श्रीमती भगाएका खलासी चितवनबाट एउटै कोठामा रगेंहात भेटीए ! भिडियो हेर्नुहोस
NepalTrending — August 2, 2021 add comment
चितवन । लाउरेकी श्रीमती भगाएका खलासी चितवनबाट एउटै कोठामा रगेंहात पक्राउ परेका छन् । असारको ७ गतेबाट बेप,त्ता भएकी स्मृति थापासगं उनी सगैं बसेको अवस्थामा रगें,हात प,क्राउ परेका हुन् । सञ्चारकर्मी उनका...	Read more »
पुरुषहरुले दैनिक १० मिनेट महिलाको स्तन हेरे आयु बढ्ने बैज्ञानिकहरुको दाबी !
NepalTrending — July 28, 2021 add comment
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा महिलाहरुलाई घूरनुलाई एक अपराधको श्रेणीमा रााखिएको छ । जबकि त्यसको ठीक उल्टो प्रतिदिन महिलाहरुलाई १० मिनेट सम्म घू’री रहनु पुरुषहरुका निम्ति स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ भन्ने न्यू ई’ङ्गल्याण्ड जर्नल अफ...	Read more »